China Aerial Work Plaform Telescopic Type Yakanaka Yekutengesa Mutengo
China Aerial Work Platform Telescopic mhando ine Kuzvifambisa yega Kudzora Mamiriro ndicho chigadzirwa chitsva chatakaburitsa munguva pfupi yapfuura.Zvakanakira zvakanakira kuti ndege yemuchadenga ine vhoriyamu diki kwazvo inogona kuita kuti ishande zvakanaka munzvimbo yakatetepa kana yekuchengetera, kunze kwekugadzirwa kwese uye hunyanzvi. zvakanaka kwazvo! Bata iwe
China Boom Lift Yakarongedzwa Towable mhando chinhu chinodiwa chemuchadenga basa chikuva mune yedu yemazuva ese basa.Iyo yakawanda hupfumi uye inobudirira kuenzanisa neyako unozvifambisa boom kusimudza.Cause inogona kukweverwa nemotokari kuenda kune chero nzvimbo yebasa.
Gonhi remukati regirazi rakagadzirwa nekweji yekukweva kapu, yemagetsi yekukweva uye deflation, kusimudzira nemaoko uye kufamba, zviri nyore uye kuchengetedza basa.Iri rudzi rwekusveta mukombe trolley inodhura yakaderera asi iine basa rinoshanda rekuti nyore girazi kubata.
Iyo yemagetsi girazi yekukaka mukombe inotyairwa nebhatiri uye haidi kuti tambo isvike, iyo inogadzirisa dambudziko rekusagadzikana kwemagetsi panzvimbo yekuvaka. Inonyanya kukodzera kukwirira-kukwirira keteni kumadziro girazi kuisirwa uye inogona kuve yakagadzirirwa maererano nesaizi
123456 Inotevera> >> Peji 1/13